20/02/2006: Submitted for publication via web
Milicso Maalmihii Ina Soo Maray – 20-ka February
by Aamina Maxamuud Diiriye, Hargeysa, Somaliland
Dhallintii UFFO ee dhiiranayd iyo
Dhagaxtuurkii waa dharaartay
Dhayal maaha illeyne
Dhab baa loo xusayaa
Qormadii hore waxaan ku soo gudbiyay dhallintii UFFO iyo sababihii keenay xadhigooda, qormaddana waxaan ku bilaabayaa maalintii la keenay Maxkamadda iyo maalintii Hargeysi saddex ahayd.
Haddaan dib u mililico anigoo ka mid ahaa ardaydii dhagaxtuurka, inkastoo waqtigaa aanu ahayn arday yaryar oo aan siyaasad waxba ka garanayn, haddana waxaa isweydiin mudan maxaa sababay inay ardaydu dhegaxtuurka sameeyaan.
Waxaa sababay dhagaxtuurka markii dhallinyaradii UFFO la keenay Maxkamadda ee la doonayay in la xukumo ayay ardaydu bilaabeen gadoodkii, iyagoo ardaydu maxkamadda horteeda ka bilaabay dhagaxtuurkii u horeeyay. Waxaan xusuustaa maalintaas inaanu qaadanay boodhadh ay ku qoran yihiin “Siyaad Barre ha dhaco” iyo erayo lid ku ahaa nidaamkii Kacaanka ee Faashiistuhu hormoodka ka ahaa.
Ta kale waxa sababay in ay ardaydu dhagaxtuurka sameeyaan waxay ahayd iyadoo dhallintii UFFO ay u badnaayeen macalimiin, sidaa awgeed ardayda ayay gaar u taabanaysay iyagoo ka gadooday ciqaabta iyo jidh-dilka sabab la’aanta ahayd ee ku dhacday UFFO. Sidaas darteed kacdoonkii iyo gadoodkii maalintaa bilaabmay wuxuu sababay inay dhallintii UFFO noqoto hormoodkii halgankii dalka lagu xoreeyay, halka ururkii SNM uu ahaa xooggii dhaqaajiyay ciidamadii faqashta ahaa.
Dhallinyaradii UFFO, intaa kadib markii la geeyay xabsigii Labaatan Jirow, waxay kala kulmeen ciqaab iyo jidh-dil aan loogu talo-gelin inay noolaadaan, balse Illaahay ka soo saaray markay soo dhammaysteen sanaddo badan oo aan laga sheekayn karayn wixii ay kala kulmeen xabsigaas.
Dhallintii UFFO, markii xabsiga laga soo daayay, waxay yimaadeen xarumihii SNM, iyagoo halkaas ka sii waday inay dalkooda u huraan naf iyo maalba, sidii ay awalba naftooda ugu hureen.
Markii dalka dib loo xoreeyay, waxay UFFO qayb libaax ka qaadatay nabadayntii iyo dib-u-dhiskii dalka, iyagoo sameeyay urur samo-fal ah oo la yidhaa SORRA oo la wada garanayo wixii ay dalka u qabteen, waxaanay ilaa maanta dantooda gaarka ah ka doorbideen danta guud isla markaana iyagoo weli dalkooda horumarkiisa ka shaqeeya.
Haddaba qoraal kuma soo koobi karo taariikhdii halgankii UFFO, waxaanay taariikhda Somaliland kaga qoran yihiin baal dahab ah iyaga iyo Mujaahidiintii xaq u dirirkii SNM.
Sidaas darteed, anigoo ka mid ah dadka jecel halgamayaashii kuna abtirsada, waxaan ummadda reer Somaliland ku guubaabinayaa inay si weyn oo qiiro leh u xusaan maalinta 20-ka February oo loo asteeyay ama loogu magac-daray Maalintii Dhagaxtuurka, una soo baxaan si nabadgelyo ah iyagoo xusuusanaya maalintaas wixii dhacay iyo maanta nabadda iyo xorriyadda aynu haysano, Illaahay baa mahaddaa leh, abaalkana halgamayaashii ayaa leh.
Ta kale, dhammaanteen waa inaynu isweydiino nabadda aynu haysanaa siday ku timi, iyadoo Illaahay ina siiyay haddana waxaa sababta lahaa inamadeenii ka dhiidhiyay gumaysigii kana doortay inay u dhintaan si dadkoodu xorriyad ugu noolaado, UFFO iyo SNM waa kuwii keenay nabadda maanta aynu haysano ee aynu Dawladda ku nahay, sidaas darteed waa inaynu u abaal-gudno oo wax walba laga hormariyo, waayo, dadyowga dunidu taariikhdaas oo kale waa lagu faannaa waana la qadariyaa halgamayaasha, waxaad moodaa in beryahan dambe la aasayo taariikhdii halgankaas, iyadoo xukuumadda maanta jirtaana taariikhda halganka ku koobtay 18-ka May oo ah gunaanadkii halganka, hase yeeshee waxaa qurux badan oo qiimaha dawladnimo ku jirtaa inay ku faanto halgamayaashii dalkan u soo halgamay. Markaa waxaan leeyahay xukuumaddu ha xusto maalinta UFFO ee 20 February iyo munaasibadaha kale ee SNM, haddii ay maalmahaas halganka xusi waydo oo ay qiimayn waydo, waxaa dhici doonta iyadana inaan hadhow la xusuusan doonin hadday wanaag samayso.
Maalinta 20-ka February waa maalintii uu Mujaahid Hadraawi lahaa:
Dareen ma hurdaana
Hidday u lahayde
Hargeysi ma toostay
Hoggaanka ma diidday
Harqoodka ma tuurtay
Sidii hebed geella
Hankeegu ma siiyay
Ninkay la hadlayso
Hagaag ma sheegtay
Hadday samo weydo
Hubaal ma caddaysay
Hayaay ka kacaayga
Ka qaybgelin hawsha.
Waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa magacyada dhallinyaradii UFFO iyo waqtigii la xidhay:
No Magaca Taariikhda la xidhay
1. Maxamed Baaruud Cali 04/11/81
2 Axmed Maxamed Yuusuf (Jabane) 02/11/81
3 Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar-xaashi 19/11/81
4 Aadan Yuusuf Abokor 19/11/81
5 Cabdiraxmaan Cabdillaahi X. Aadan 19/11/81
6 Axmed Xasan Caabi 05/12/81
7 Xuseen Maxamed Ducaale (Berberaawi) 19/11/81
8 Maxamed Sh. Xasan Taani 19/11/81
9 Cabdillaahi Cali Yuusuf (Colaad) 19/11/81
10 Maxamed Dagaal Xirsi 11/11/81
11 Cali Cigeh Faarax (Biid) 11/12/81
12 Yuusuf Cabdillaahi Kaahin 11/12/81
13 Cismaan Cabdi Meygaag 04/12/81
14 Maxamed Cabdi Ducaale (Ayuub) 11/12/81
15 Aadan Warsame Siciid 11/12/81
16 Maxamed Cali Ibraahim 11/12/81
17 Axmed Muxumed Madar 14/12/81
18 Cumar Ciise Cawaale 04/12/81
19 Maxamed Cali Sulub 11/11/81
20 Baashe Cabdi Yuusuf 29/12/81
21 Ismaaciil Cabdi Hurre 09/01/81
22 Xasan Cabdisalaam Sh. Cali 09/01/82
23 Axmed Xasan Madar 10/01/82
24 Maxamuud Cabdi Jiciir 30/12/81
25 Maxamed Macalin Cismaan Axmed 30/12/81
26 Siciid Maxamed Ibraahim 06/02/82
27 Ismaaciil Xaashi Madar Lama xidhin
28 Xasan Cabdillaahi Cali (Ceel-geeye) 04/12/81
The views published here are solely those of its authors (Aamina Maxamuud Diiriye, Hargeysa, Somaliland) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.